कोरोनाबारे नबोल्न डाक्टरलाई सरकारको निर्देशन « Loktantrapost
कोरोनाबारे नबोल्न डाक्टरलाई सरकारको निर्देशन
६ बैशाख २०७७, शनिबार २०:२२
झापा । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को संक्रमण देखिएपछि सरकारले टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाएको छ ।
शनिबार मात्र एक संक्रमित निको भएर घर फर्किइन् भने एक संक्रमित उपचाररत छन् । कोरानाको आशंका पनि अधिकांश बिरामी त्यहीँ पुग्छन, अस्पतालहरु पनि त्यहीँ रिफर गर्छन् ।
अरु अस्पतालभन्दा टेकुमा बढी चाप छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको खटाइ पनि बढी छ । थोरै संख्यामा रहेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई), एन– ९५ मास्क कम खपत होस् भनी २४ घण्टे ड्युटी गर्छन् । घर परिवार र समाजको दबाब र तनाव पनि छँदैछ ।
त्यसका बाबजुद टेकु अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोनाविरुद्ध अग्रपङ्गितमा खटिएका छन् ।
त्यसरी खटिएकामध्ये एक डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सरकारले भने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की भने टेलिफोनबाट बोलाउँदा नआएपछि पत्र काट्नु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘मन्त्रालयले आफ्नो विधि र प्रक्रियामा रहेर काम गर्न पनि नपाउने ? विज्ञको सल्लाह लिन पो बोलाएको हो कि ?’
डिसेम्बरको अन्त्यमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले इटाली हुँदै स्पेनसम्म फैलियो । त्यसपछि युरोपली मुलुकहरुमा पनि कोरोनाको महामारी फैलियो । नेपालमा पनि माघ १० मा पहिलो संक्रमित भेटिएको थियो ।
तर, त्यसपछि दुई महिना संक्रमण देखिएन । यो पूर्व तयारीका लागि नेपालले पाएको समय थियो । तर, त्यसअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । कोरोनाको जोखिम, सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी लगायतका विषयमा सञ्चार माध्यमहरुमा निरन्तर खबर आइरहे । त्यसमा काहीँ न काहीँ डा. पुन पनि जोडिन्थे ।
हाइटीमा नेपाली सेनामाथि झाडापखाला लगाएको आरोप लाग्दा खण्डन गरेका डा. पुन सरुवा रोग विशेषज्ञ हुन् । साथै टेकु अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक भएकाले सञ्चारमाध्यमहरूले उनलाई पनि सोध्थे । उनले पनि आफूले जानेको विषय सहज रुपमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सेयर गर्थे ।
त्यहीकारण उनी मन्त्रालयको तारो बने । डा. पुन मात्र होइन, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको सञ्चारमाध्यममा नाम आयो कि मन्त्रालयले कोरोनासँग सम्बन्धित धारणा नराख्न निर्देशन दिने गरेको पाइएको छ ।
त्यही कारणले अस्पताल प्रशासन र डाक्टरहरु सामान्य जानकारी दिन हच्चिन थालेका थिए । डा. पुन स्वयंले पनि सञ्चार माध्यममा धारणा दिन इन्कार गर्न थालेका थिए ।
तर, संक्रमण बढ्दै जाँदा अलमल पनि बढेपछि उनले विज्ञको हिसाबले धारणा राख्न थाले । ‘मैले प्राविधिक कुरा मात्रै बोल्ने गरेको छु’ डा.पुन भन्छन, ‘विज्ञको नाताले आफूले जानेको जानकारी दिँदा कारबाहीमा परिन्छ भने के भन्नु र ?’
डा. मरासिनी महामारी, रोग, औषधि जस्ता कुरामा जनताले डाक्टरकै भनाइमा विश्वास गर्ने बताउँछन् । मन्त्रालयले आफ्नो कमजोरी र असक्षमता लुकाउन कसैलाई ‘बलिको बोको’ बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
‘कोरोनाका विषयमा नबोलेका हुनाले नै समस्या आएको हो’ डा.मरासिनी भन्छन, ‘यस्तो महामारीका बेला कोरोनाको विषयमा डाक्टर नबोले को बोल्ने त ? (अनलाइन खवरबाट)